Mahazoa torohevitra avy amin'ny Mpisolovava Mahafeno fepetra | Orinasa Mpampanoa lalàna
Tongasoa eto amin'ny Amal Khamis Advocates and Legal Consultants, iray amin'ireo orinasa mpanao lalàna malaza indrindra any Dubai. Ekipa matihanina ara-dalàna manolo-tena hanome torohevitra sy fanohanana tsara ho an'ny mpanjifanay izahay. Aminay, tsy misy fahafaham-po lehibe kokoa noho ny fahafahana manampy olona iray hijoro amin'ny zon'izy ireo na inona na inona niatrika fiampangana heloka bevava na mila fanohanana ara-dalàna amin'ny olana andavanandro.
Manome antoka izahay fa voangona ny zava-misy rehetra mba hahafahantsika mandray ny hetsika tsara indrindra ary manome vokatra mihoatra ny nantenainao. Afaka matoky ianao fa tonga amin'ny toerana mety ianao rehefa miara-miasa aminay.
Fakan-kevitra maimaim-poana, tsy misy adidy
Ny fifampidinihana voalohany tsy misy adidy dia porofon'ny fanoloran-tenanay hanampy anao amin'ny olanao ara-dalàna. Tsy misy adidy dia midika fa tsy manana fanerena hanakarama anay ianao ary tsy misy sarany ho an'ity fifampidinihana voalohany ity. Raha ny marina, raha misy zavatra tsy azonao na mila fanazavana fanampiny dia faly izahay hamaly izay fanontaniana mety anananao.
Inona no tafiditra amin'ny fotoam-pivorianay amin'ny mpanjifa
Rehefa tonga amin'ny fifampidinihana ianao dia haka fotoana izahay:
Miresaha aminao momba ny ahiahinao.
Avereno jerena ireo antontan-taratasy mifandraika amin'izany alohan'ny hanomezana anao ny fomba fijerinay momba ny fomba inoanay fa tokony hampiharina amin'ny raharahanao ny lalàna.
Manaova drafitra momba ny fomba hanampiana anao.
Lazao aminao tsara hoe ohatrinona no ho lany aminay hisolo tena anao, miaraka amin'izay mety ho fandaniana hafa.
Na dia toa mavesa-danja aza izany, ny fifampidinihanay dia natao hanamora ny fizotran'ny lalàna ho an'ireo mpanjifa izay tsy mahalala ny takina aminy na ny zony.
Manoro hevitra ireo manam-pahaizana amin'ny sehatra maro momba ny lalàna
Na mila mpisolovava mpiaro ny heloka bevava ianao, mpisolovava ny zonao amin'ny Lalàna momba ny fiarovana ny zaza, na torohevitra ara-dalàna momba ny fametrahana raharaha sivily, eto izahay hanampy. Ny fahaiza-manaonay dia tena sarobidy amin'ny mpanjifanay ary nahavita nampiaiky volana ireo mpitsara izay niantso anay hatrany mba hisolo tena ny tombontsoany.
Ny serivisy ataonay dia ahitana fa tsy voafetra amin'ny:
Lalàna momba ny fianakaviana - anisan'izany ny fisaraham-panambadiana, ny fitazonana zaza ary ny fanohanana
Lalàna momba ny asa - ao anatin'izany ny fampitsaharana tsy ara-dalàna sy ny fifandirana momba ny karama
Lalàna momba ny fifindra-monina - manampy ny olona hifindra any UAE ara-dalàna & mahomby
Zon'ny sivily - fahatakarana ny zonao amin'ny maha-olom-pirenena ao Dubai na any an-kafa
Lalàna momba ny fanalam-baraka - miady amin'ny fanalam-baraka sy fanalam-baraka
Faharatrana manokana - manampy anao hahazo ny tambin-karama mendrika anao aorian'ny loza
Fiarovana heloka bevava - manome fanohanana ara-dalàna matanjaka ho an'ny olona miatrika fiampangana heloka bevava
Loza fiara sy ratra manokana
Lalàna momba ny fananana
Na inona na inona toe-javatra misy anao, afaka manampy anao hiatrika izany izahay ary hanampy amin'ny fiarovana ny zonao.
Fanohanana ara-dalàna an-trano avy amin'ny Ekipa manam-pahaizanay
Ny ekipanay mpisolovava sy mpanolo-tsaina dia nofantenana tsara mba hahazoana antoka fa mahazo fanohanana ara-dalàna tsara indrindra ny mpanjifanay. Miara-miasa isika rehetra, mifampizara fahalalana sy traikefa amin'ny tsirairay mba hahazoanao ny torohevitra tsara indrindra isaky ny mila anay ianao. Miaraka amin'ny traikefa 20 taona mahery amin'ny sehatra ara-dalàna isan-karazany, manana fahalalana sy fahaiza-manao midadasika izahay izay azonay hanomezana tolotra tsara indrindra ho anao.
Takatsika fa mety hampatahotra ny hifandray amin'ny orinasa mpanao lalàna na mpisolovava any Dubai, fa ny ekipanay sariaka dia faly mamaly ny fanontanianao rehetra alohan'ny handoavam-bola anao. Manolotra safidy fandoavam-bola maro samihafa ihany koa izahay, anisan'izany ny fametrahana isam-bolana, izay midika fa afaka mahazo ny fanampiana ara-dalàna ilainao ianao nefa tsy mila manahy momba ny vidiny.
Maninona no misafidy ireo mpisolovava sy mpanolotsaina ara-dalàna an'i Amal Khamis?
Nandritra ny taona maro dia nanampy olona maro tany Dubai sy tany ivelany izahay. Fantatsika fa ny fanampiana ara-dalàna dia afaka mitondra fiovana marina amin'ny raharahanao, koa raha mila olona mahafantatra ny filanao ianao dia makà fotoana hamakiana ny sasany amin'ireo tantaram-pahombiazanay ho fitaomam-panahy. Miaraka aminay dia hahazo:
Serivisy mora vidy: Ny drafitra momba ny vidiny dia natao mifanaraka amin'ny teti-bolanao, mba hahazoanao ny fanampiana ilainao tsy handrava ny banky.
Ekipa ara-dalàna manokana: Hahazo mpisolovava manokan-tena ianao izay hijanona eo an-tampon'ny raharahanao ary hanavao anao amin'ny dingana rehetra. Manolotra fakan-kevitra maimaim-poana ihany koa izahay izay ahafahan'ny mpisolovava anay hahalala bebe kokoa momba ny raharaha ary hampiseho aminao ny safidy azonareo.
Serivisy tsy misy manahirana: Tsy tianay ny hisian’ny olana ara-dalàna amin’ny asanao, na ny fianakavianao, na ny fiainanao andavanandro, ka ataonay antoka fa voakarakara ho anao ny zava-drehetra, manomboka amin’ny fametrahana taratasy ka hatramin’ny fitantanana ny fifandraisana amin’ireo antoko hafa voakasika.
Ny fahafaham-po amin'ny fahafantarana ny zonao: Raha tsy afa-po amin'ny vokatry ny raharahanao ianao dia tsy mila mandoa vola aminay.
Experience: Nanampy olona maro tamin'ny toe-javatra mitovy amin'ny anao izahay, noho izany dia fantatray izay mety aminao sy ny fomba hahazoana vokatra.
Miandry ny hanampy anao amin'ny olanao ara-dalàna izahay
Azonao atao ny mandray soa avy amin'ny fahalalantsika ny lalàna UAE sy ny traikefa azo ampiharina amin'ny fandraisana ny dingana mety amin'ny raharahanao. Ny tanjonay dia ny hanampy ny mpanjifanay hahatratra ny vokatra tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra ara-dalàna ary hanao izay rehetra azonay atao izahay mba hahazoanao ny vokatra mendrika anao.
Manomboha amin'ny fiantsoana anay izao amin'ny +971506531334 na +971558018669, na mandefa mailaka aminay amin'ny case@lawyersuae.com. Misy 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro ny laharana fanampiana anay, koa aza misalasala mifandray aminay isaky ny mila fanampiana momba ny raharahanao ara-dalàna ianao.
Manantena ny hiara-hiasa aminareo izahay!
Hevitra 27 momba ny “Get consultation from Qualified Advocates”
12/24/2014 amin'ny 7:01 maraina
Te-haka endrika endrika MOU aho izay hatao sonia eo amin'ny orinasa mpivarotra mpivarotra roa trano izay misy ny tanjon'ny MOU dia ny hizara antsipirihany fananana izay samy tsy afaka manatona ny tompon-trano / Mpanofa / Mpividy / Mpivarotra fananana nifampizara teo anelanelan'ny tsirairay avy.
Ohatra. - Ny mpividy anay, ny mpivarotra azy ireo. Izy ireo dia tsy afaka manatona ny mpividy na amin'inona na amin'inona ary ny mifamadika amin'izany.
Tokony ho toy izany avokoa ny karazan-tserasera rehetra ao amin'ny Fivarotana Real Estate Brokerage. Ary koa, ny vaomiera rehetra / ambony atao amin'ny fifanarahana tsirairay dia tokony hizara mitovy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Izany dia tokony hotandremana mangarahara.
Azafady azafady azafady.
02/04/2015 amin'ny 6:51 PM
Mifandray aminao aho momba ny fakan-kevitra takiana amin'ny alàlan'ny mailaka na antso amin'ny kaonferansa miaraka amin'ny fahafaha-manao fandoavam-bola amin'ny Internet.
Ity ambany ity ny toe-javatra iray manontany ny namako malalako ary hankasitrahanay ny valiny voalohany sy tsara indrindra nataonao:
Ilay namako, avy any Serbia, dia niasa tao Qatar nandritra ny taona maro ka hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay.
Nandritra ny fialan-tsasatra isan-taona dia nisy olana manokana nitranga tao aminy noho izy tsy afaka niverina tany Qatar.
Nanana trosa fampindramam-bola manokana sy carte de crédit izy, sahabo ho eo. habetsahan'ny 370 000 QAR ao amin'ny banky eo an-toerana.
Ankehitriny rehefa avy namita ny olany izy dia nahavita nahazo tolotra asa tany Dubai UAE.
Fanontaniana mila valiny, amin'ny fomba fijery ara-dalàna:
1. Afaka miditra any UAE ve izy raha tsy misy olana?
2. Moa ve manana olana amin'ny famoahana visa visa any UAE izy?
3. Raharaha manokatra kaonty any amin'ny banky UAE ve izany?
Mba tsarovy fa nanao fisaraham-panambadiana izy teo, izay nampiarahany ny anarany an-janany ary vao avy namoaka pasipaoro vaovao.
Manantena ny valin-teninao haingana.
02/25/2015 amin'ny 1:44 PM
Teratany Indianina mipetraka any Dubai aho, 20 taona lasa izay, mikasa ny hanana trano fonenana (RV) ao UAE aho, misy fepetra tokony hividianana sy hijanonana ao amin'ny Home Home.
03/23/2015 amin'ny 9:09 maraina
Avy any India aho izao, miasa any dubai aho, indrisy fa ny taratasy fanambadian'ny fanambadiako dia tsy nanao pirinty ny anarako toy ny amin'ny anaram-boninahitra, ny surname dia ao amin'ny toerana misy ny anarako.
SUR ANARANA: 123
araka ny UAE ID nataoko amin'ny ABC 123 ny anarako
fa ny taratasy fanamarinam-panambadiako dia voatonona ho toy ny 123 ABC
mbola tsy manamarina ny mari-pankasitrahana amiko, misy olana hitranga amin'ny fanamafisana?
tiako ny hamafana ny mari-pankasitrahana avy any UAE, omeo soso-kevitra aho ary inona no zavatra ataoko hanitsiana izany.
Te hanampy ny vadiko ao anatin'ny pasipaoroko aho.
04/07/2015 amin'ny 4:00 PM
Mpikambana ao UAE aho nandritra ny 13 taona lasa, nanangana orinasa tany UAE, ary manana orinasa. Tamin'ny taon-dasa tamin'ny volana febroary 2014, dia nametraka raharaha polisy nanohitra ahy ny antoko hafa noho ny fisavana am-bavany mitentina eo amin'ny 1.3 tapitrisa AED. Ny antoko hafa dia nanome ahy io vola io ho toy ny fampindramam-bola ho takalon'ny vola, izay nomeko azy ireo, ary misy ny fifanarahana ara-bola. Tamin'izany fotoana izany, satria tsy manam-bola aho dia nangina, ny polisy dia nandefa ny antontan-taratasy tany amin'ny fitsarana, ary nisy heloka bevava napetraka tamin'ny sazy an-tranomaizina 2 taona ho ahy raha toa ka tsy afaka manome ilay vola aho. Nandritra ny fiandohan'ny volana Aogositra 2014 dia nahazo ny vola aho ary nanao fandaharana mba hiantso ny antoko hafa amin'ny alàlan'ny komity fitsarana, hamerenako imbetsaka ny fitaovako, hamerina ny volany ary hampandamina ilay raharaha momba ny heloka bevava amin'ny alàlan'ny fanalavoana azy io. Ny andaniny hafa dia nanalavitra ny fotoana rehetra hametrahana ity olana ity. Angamba tsy manana ny fitaovako izy ireo, na angamba namidiny ny fitaovam-piasana na mety nanimba ny fitaovako izy ireo ary tsy afaka mamerina izany amin'ny toe-piainana azy na na ny fikasan'izy ireo aza dia ny fitazonana ny fitaovako ihany koa ary hahazoana ny volany indray manararaotra ny lalàna mifehy ny famandrihana UAE.
Avy eo nametraka raharaha momba ny raharaha sivily aho tamin'ity fifandraisan'ny raharaha momba ny heloka bevava ity ary tamin'io fotoana io ihany koa dia azoko atao ny mitaky fahazoan-dalàna (famotsorana) ho ahy izay nanolorako ny vadiko sy ny vadiko ary ny iray amin'ireo pasipaoroko mpiara-miasa amiko. Nahenoana fitsarana tao amin'ny fitsarana ny raharaha heloka bevava ary taorian'ny fakana am-bavany efatra, dia nanapa-kevitra ny hamoaka fitsarana ny mpitsara faha-5 izay niseho tamin'ny faran'ny volana lasa teo. Ny didim-pitsarana dia navoaka ho toy ny «Mba hitandremana ny fahombiazan'ny fanapahana taloha, izany hoe ny 2 taona ny fampidirana am-ponja raha tsy mandoa vola ny vola». Nandritra ny 10 andro mahery taorian'izany, satria tsy nosoniavina sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy fitsarana, dia nametraka fitoriana aho ary nanaiky izany ny fitsarana ary nanome ahy ny fandraisana. Ny fitsarana dia nanambara ny datin'ny fitsarana am-bavany amin'ny faran'ny herinandro faha-3 amin'ity volana ity. Vao omaly, nahazo ny taratasy fitsarana ofisialy aho ary nametraka ny taratasy fangatahana hanohizako ny famotsorana miorina amin'ny zava-misy fa hitohy ny pasipaoro telo ho toy ny antoka ary efa eo amin'ny fitsarana izany.
1. Inona no hitranga raha ny fitsarana tsy manasazy ny famoahana antoka (famotsorana)?
2. Raha tsy manome fetra ny fitsarana ary rehefa manatrika ny fakana am-bavany amin'ny daty voatondro ao amin'ny fitsarana, dia mahasambotra ahy ve ny polisy?
3. Raha tsy omena alalana ny fahazoan-dalàna dia azoko apetraka amin'ny fitsarana ihany koa ny vola fisavana trosa alohan'ny daty fampandrenesana ny fangatahana fitoriana ary hamahana ny raharaha mpanao heloka bevava ary hanaisotra ny pasipaorantsika sy anarana anarana esorina amin'ny lisitry ny lisitra? Amin'ity toe-java-misy ity dia afaka mamaha ny fikajiana ny raharaha heloka bevava ary izaho irery ihany no manana safidy hanamarina ny tenako fa marina amin'ny raharaha sivily?
4. Mbola miatrika loza ve aho raha mandeha any am-ponja, na dia mandoa ny volan'ny fisavana tampoka aza aho isaky ny ambaran'ny fitsarana?
07/13/2015 amin'ny 8:12 maraina
Vahiny eto an-tany manomboka any 1 taona sy tapany aho. Ny asako voalohany teto dia ny Mpanolotsaina fananana iray tamina orinasa Real Estate any Dubai. Ny tompon'ny orinasa dia mpivarotra expat iray ihany koa, dia nanana POA ny fananana maro, izay no nahitako mpividy iray amidy mandritra ny 4 volana mahery. Taorian'ny nahazoany ny vola, izay azon'ny mpividy amin'ny tompon-trano POA amin'ny Oktobra 2014, dia tsy namindra ny fananany tamin'ny mpividy izy io. Noho izany, ianao mpividy dia nametraka raharaha iray tamin'ny tompon'ny POA, ary ny orinasa sy ny tompon'andraikitra amin'ny POA izao dia manasa fotoana any amin'ny fonja amin'ity raharaha ity ihany. Koa satria tsy nandoa ny karamako tamin'ny Novambra 2014 izy, dia niala tamin'ny orinasa tamin'ny tapaky ny volana Desambra.
Androany aho nahazo antso avy amin'ny Fitsarana Dubai izay nangataka ahy hanangona fanamarihana avy amin'ny Departemantan'ny Fanamarihana 112, satria manana tranga voasoratra ao amin'ny Mpividy ilay fananana mitovy amin'ny anarako 1.5 tapitrisa AED.
Tsy azoko antoka hoe inona no hatao amin'ity toe-javatra ity, nokaramaina aho tamin'ny 5000 AED, izay tsy naloany tamiko akory tao anatin'ny 3 volana niasako tany. Tsy mbola nahazo vola na komisiona tamin'io fifanarahana voalaza io koa aho. Ka ny fanontaniako eto dia:
1. Ahoana no andraikitry ny andraikitra amin'izany?
2. Tokony handeha hiatrika fitsarana ve aho?
3. Mila torohevitra ara-dalàna aho amin'ny raharaha maika, tsy mahafantatra tsara ny lalàna eto aho ary tsy te-hiditra amin'ny olana na inona na inona.
07/19/2015 amin'ny 6:54 PM
Mba anomeza torohevitra tsara ny fomba ahazoako ny zanako lahy 1 taona eo ambany fiahianay rehefa misaraka aho.
Ny vadiko dia nanenjika ahy matetika, nikapoka ahy ary nisalasala ahy, tsy te hiasa izy ary te hiaina amin'ny volako
07/26/2015 amin'ny 2:28 PM
Silamo indiana aho. Te hisara-panambadiana amin'ny vadiko aho. Azonao atao ve ny manome torohevitra ahy azafady hoe inona no lalàna mahasoa ahy (indianina na Shariah) amin'ny fifehezana tanteraka ny zanako (Zazalahy iray 9 taona ary zazavavy 3 taona)
08/17/2015 amin'ny 10:14 PM
azafady mba ampio aho ary tariho aho ny fomba hamihirako ireo probal-ko. izaho ao amin'ny fianakaviako no mikarakara azy ireo. manana carte de crédit sy carte de crédit avy amin'ny finiavana eto amin'izao tontolo izao aho.
tao anatin'ny 36 volana dia nandoa reguler 21 volana aho. carte de crédit koa dia mampiasa 20 volana tsy tapaka ary mandoa ny vola hafa rehetra sy ny fandoavana. nefa ny farany dia mijaly amin'ny fizahan-tany aho ary tsy afaka nandoa. nomanin'izy ireo ny fisavana. ary ankehitriny dia fitarainan'ny polisy. Ao amin'ny problum aho. manan-janaka kely aho ary sisina. ampio aho hanampy ahy Andriamanitra hitahy anao rehetra, tsy manana ray aho. izaho no loholona ao amin'ny fianakaviana. samy kely daholo ny bro sis. ampio aho azafady. Vonona ny handoa vola aho amin'ny vola kely isam-bolana. nefa tsy afaka mandoa vola araka ny fanirian'izy ireo. azafady mba ampio aho. hanaisotra anarana amin'ny alàn'ny polisy. hahatonga ny tranobain-ko ao anaty trano mora foana
09/22/2015 amin'ny 5:15 PM
Te hanana torohevitra ara-dalàna aho. Mividy Yacht aho amin'ny 100% -n'ny volako nefa ny dokambarotra dia hampiasaina amin'ny orinasa ara-barotra fotsiny. Satria tsy manana lisansa ara-barotra aho.
Te-hahafantatra aho fa misy taratasy na porofo azo atao izay mahatonga ny tompon'ny yacht. Nilaza ny orinasa fa afaka manao moa ny fitsarana izy ireo satria marina ve izy ireo ??
Te hanana antontan-taratasy ara-dalàna aho. Ka tsy hisy olana amin'ny ho avy.
Ampio aho hiresaka an'izany.
10/24/2015 amin'ny 2:34 PM
ny antontan-taratasy ara-dalàna dia azo atao Balpreet, mifandray aminay.
10/04/2015 amin'ny 4:12 PM
Andriamatoa / Mam
Manana fahazoan-dàlana any Dubai aho, manana fifanarahana asa, nefa mahazo asa tsara kokoa ao Ras al Khaimah aho, saingy matahotra ny pasipaoroko izay boky (tsy Machine Read Passport),
manome alalana ahy ny Emirate of Ras al Khaimah?
avy eo aorian'ny fetin'ny pasipaoro (20-Nov-2015),
inona no hitranga amin'ny fahazoan-dàlana sy pasipaoroko?
11/06/2015 amin'ny 6:02 PM
Nahazo asa tao amin'ny orinasa iray aho ho mpitantana varotra an-tserasera. Nanamboatra tranokala ho an'ny orinasany vaovao aho nefa tsy nahazo visa na fifanarahana asa. Nosakanan'ny orinasa aho satria tsy hanaja ny sasany amin'ireo politikany vaovao. Tsy nety nandoa ny karamako izy ireo ary nilaza fa nandany ny visa-ko izy ireo ary voatery nanafoana izany. Ary tsy naka ny karamako feno aho nandritra ny volana voalohany. Noho izany dia naviko tany amin'ny google ny tranokala nataoko ho azy ireo mandra-pandoany ny karamako.
Efa nandany 2 alina tany am-ponja polisy aho ary nivoaka tsy nisy fahafahana vonjimaika. Mbola miantso ahy ny lehibeko teo aloha milaza fa handray fepetra ara-dalàna tanteraka toy ny lalaon-jaza ny 2 alina tgereko. Koa mba tariho aho amin'ity raharaha ity. Tokony havelako hanana ny tranokala ve izy sa tsy maintsy mandoa vola amiko izy?? Satria fantatro fa adidin'ny mpampiasa ny manao visa ary tsy nametra-pialana aho.
11/30/2015 amin'ny 6:07 PM
Herintaona lasa izay, nisy masoivoho iray naka vola Rs.50,000 tamiko ho fandrosoana amin'ny fandaminana ny asa any UAE. Nampanantena izy fa hahazo asa ao anatin'ny 2 volana nefa tsy afaka mandamina asa ao anatin'ny fotoana fohy. Naveriny ny volako mialoha. Nanidy ny biraony koa izy avy eo ary nanjavona.
Izao, rehefa afaka herintaona, dia nanapa-kevitra ny handeha any amin'ny visa fizahan-tany mankany UAE aho mba hanandrana ny vintana ahy fa rehefa ny masoivoho fitetezana no nampihatra ny visa, dia nilaza tamiko izy fa efa misy, misy visa visa ampiharina amin'ny fifindra-monina ho anao. Noho izany, tsy afaka mahazo visa visa ianao. Gaga be aho nahalala izany. Nangataka azy aho mba hilaza amiko hoe iza ilay orinasa nangataka an'io visa io? Tsy nahavaly izy. Nilaza izy fa azony atao ny hanafoana ny visa fanaovana asa. Nangataka azy ny hanafoana azy aho satria tsy mahalala na inona na inona momba izany.
Ka ny mpandraharaha fitsangatsanganana dia nofoanana aloha ilay izy ary avy eo nahazo visa visa ho an'ny fizahantany. Izao aho dia manana fanontaniana. Voarara ve ny hahazo asa any UAE? Raha izany no izy, ahoana ny fomba hanaisako ny fandraràna ny asa satria tsy haiko hoe iza no nanao fangatahana visa. Tsy nifandray tamin'iza mihitsy aho hatramin'izay. Tsy mbola nahazo fangatahana asa mihitsy aho. Ampianaro aho.
01/10/2016 amin'ny 1:49 PM
Tao anaty lozam-pifamoivoizana ny fiara ko ny 1 Jan. Nandao ny fiara ho lasa mpivarotra aho hanova kojakoja vitsivitsy. Taty aoriana dia nahazo antso avy any amin'ny saeed aho ho tonga eny amin'ny fivarotana. Ilay mpiasa avy any amin'ny tranombarotra, raha namindra ny fiarako dia very fanaraha-maso ary namely ny fidirana amin'ny fivarotana. Miantoka tanteraka ny fiarako. Ankehitriny rehefa avy nametraka fitakiana dia nandà ny handoa ny fanamboarana ny orinasam-piantohana.
Mety ve izy ireo sa manao izany sa misy safidy hafa?
01/25/2016 amin'ny 3:59 PM
Manambady amin'ny lanonana kristiana iray ao Filipina aho, nanomboka tamin'ny taona 2012 tsy miaina miaraka amin'ny vadiko ary mandritra io fotoana io dia mamorona elanelana sy fahasamihafana izay mahatonga antsika hisafidy ny lalana heverintsika fa mety aho, niova ho amin'ny islam november 2015 aho fa mbola mbola kristianista ary izy mandà ny fiovam-po, hoy izy tamiko fa avelao hanao fifanarahana fisarahana fotsiny ary mametraka fisaraham-panambadiana eto dubai taty aoriana, handeha any filoham-pirenena ihany koa izahay hametraka ny fanapahana ity dia manome toky fa tsy misy na iza na iza amintsika na dia ny fianakaviantsika aza tsy mahazo fanararaotana ara-pihetseham-po amin'ity resaka ity. mila mpisolovava ve isika sa amin'ny alàlan'ny fifanarahana fisarahana nadika afaka manohy ny fisaraham-panambadiana?
01/29/2016 amin'ny 11:34 PM
Ny anarako usama
Miatrika fianakaviana vitsivitsy momba ny fanambadiako aho
Tiako ny tovovavy iray avy any Pakistan ary india aho
Nolavin'ny fianakaviany aho noho ny tsy fitovian'ny firenena
Izahay mianakavy dia nanao toy izany taminy
Ary ny ankohonany dia manery mafy ny hanambady azy amin'ny olon-kafa 1
Ka tena mifanambady izahay e!
Ka mba misy torohevitra ara-dalàna ahafahako manambady an-dravehivavy
Ary eny, samy manaraka ny finoana islam izahay
05/07/2016 amin'ny 1:35 PM
Noho ny tsy fifanarahana ao amin'ny lisitry ny sonia nataoko dia ny mandoa vola no aloa amin'ny alàlan'ny vola ary manangona ny taratasim-bola.
Ny 27 aprily, dia nanao toy izany koa aho, nalaiko ny fandoaam-bola isaky ny vola andoavako. Tsy hita ilay tompona ka tsy maintsy nitsidika azy tao intelo, voatery voatery niandry teo ivelan'ny biraony tamin'ny faran'ny andro mba hitondrana ny vola. Saingy tsy nanaiky izy ny vola ary nilaza izy ireo fa efa voatahiry ny maraina.
Farany tamin'ny voalohan'ny volana Mey dia notaterin'ny tompon'ny biraony ny taratasim-pahefana ary tamin'io andro io dia natolotro ny tompon'ny tompony ho fanamafisana fa haverina rahampitso ny taratasim-bola.
Ankehitriny tompony dia mitaky fanasaziana 500 AED noho ny fanamarinana bounce sy fandrahonana hitatitra raharaha ara-dalàna. Tsy namerina ny taratasiko ny tompony ary slipom-bola ihany no nahazo. Ny tompony koa dia manana tahiry izay manodidina ny + AED 3000.
1) Afaka mametraka raharaha ara-dalàna hitranga amiko ve ny tompoko, na dia tsy misy fika mbola miandry aza?
2) Moa ve mila mandoa sazy aho satria efa nomeko vola ny daty fanamarinana.
* Ny sazy an'ny AED 500 dia voalaza fa fifanekena.
* Ny kaonty nangatahana dia ny kaontin'ny banky mihidy.
* Ny 27 aprily, rehefa voalaza fa efa narotsaka ny taratasim-bola, dia nanontaniako ny momba ny banky ary ny anaran'ireo banky diso no notaterina. (ny anaran'ilay banky izay voalaza fa nanana vola ampy)
ho ankasitrahana be ny valinteninao.
Raha ny momba,
01/03/2017 amin'ny 9:09 PM
Mila fanampiana vitsivitsy amin'ny fandaminana trosa aho, manana trosa 2 sy carte de crédit 4 misy banky maro samihafa aho.
Nandoa vola isam-bolana aho mandra-pahatongan'ny orinasako taloha tsy nandoa ny karamanay nandritra ny volana maromaro ary avy eo dia nametra-pialana tamin'ny mpampiasa ahy aho ary tsy maintsy niandry 4 volana ho an'ny mpampiasa ahy vaovao hamita ny fizotry ny visa vaovao.
Nandritra ny 12 volana farany dia niady mafy izahay mba hanohizana ny fandoavam-bola ary maniry ny fanampianao hanamaivana ny fanaintainana sy ny mijaly isan'andro. Ny totalin'ny trosa dia manodidina ny AED 150,000
02/02/2017 amin'ny 5:15 maraina
Manoratra aho mba hijery raharaha. Izaho dia nametraka fitoriana (fanodinkodinam-bola) nataon'ny mpampiasa ahy tamin'ny volana oktobra 2015. Izay manome toky anao fa tsy nataoko. Hatramin'ity fanoratana ity dia mbola any amin'ny Fitsarana ny raharaha ary mbola manohy ny famoahana ny datin'ny didim-pitsarana. Efa nijanona tsy niasa ho an'io mpampiasa io aho hatramin'ny nanombohan'ny raharaha ary tapitra izao ny Visa fonenako. Tsy afaka nangataka asa na manafoana ny visa aho satria nalain'ny polisy ny pasipaoroko rehefa nanomboka ny raharaha.
Ny fanontaniako dia afaka apetraka sy mahazo visa vetivety aho (vetivety?) Raha mbola mitohy ny raharaha? Raha eny, inona avy ireo dingana tokony hataoko mba hanohizana izany?
02/25/2017 amin'ny 11:02 maraina
Hi tsara ny andro
Nijanona 8 taona aho talohan'ny tany Emirà Arabo Mitambatra nanana olana aho tamin'ny 2015 taloha tany sharja momba ny antontan-taratasy momba ny raharaham-bahiny amin'ny hajia hoy izy ireo fa sandoka izany taorian'izay dia nahazo ny raharaha aho dia n gv ahy ny didim-pitsarana nandritra ny 6 volana taorian'ny nanaovako antso avo tamin'ny fandefasana ny antontan-taratasiko tamin'ny vahiny. hajia momba ny raharaha n hajian'ny masoivohon'i UAE eto Philippines rehefa nahazo ny didim-pitsarana farany nataoko izy ireo dia manome valiny ho an'ny tsy manan-tsiny tamin'ny 2016 ka akaiky ny raharaha n nanadio ny anarako aho fa voaroaka manana visa aho ary tsy manana raharaha. fa mbola voaroaka any amin'ny fireneko aho ahoana no hanesorana na ahoana no ahafahako manao antso avo amin'izany mba hisian'ny fiovana hiverina any Emirà Arabo Mitambatra ahoana no ahafahako manala raha azo atao dia afaka manaisotra ny fandraràna ny lisitry ny sakana any UAE raha misy fiovana vonona izahay. maka torohevitra ara-dalàna raha toa ka mandoa an'izany ho ara-dalàna aho dia mandeha amin'izany lalana izany.
Antenaina fa hisy olona afaka hilaza raha misy fiovana amin'ny olako.
Miarahaba sy misaotra anao
03/19/2017 amin'ny 8:35 maraina
Raha ny marina dia niasa ho injenieran'ny Qc tao amin'ny orinasa iray tao abudhabi aho taorian'izay nahazo tolotra asa vaovao avy amin'ny orinasa hafa izay napetraka tao amin'ny dubai. Ka nofoanana ny visa-saiko ary nankany india aho. Hatramin'ny dimy volana no niandrasana visa aho, nefa tsy nahazo ny visa avy amin'ny orinasa Dubai. Azafady, omena torohevitra aho fa hametraka raharaha manoloana an'io orinasa io.
Fanamarihana: Eto amin'ny Abu dhabi aho izao.
06/10/2017 amin'ny 8:41 maraina
Ahoana no hahalalako raha manana raharaha polisy aho?